Izinketho Zokuhweba Ezingenhla Broker
Ngubani Olahla Izinketho
Umlando Of Izinketho
Izinketho Ukuhweba Uluhlu lwamagama
Ukuqonda Izinketho Zokuthengiselana Ukuhweba Forex
Izinketho ze-Forex nezinambambili
Uyemukelwa kwi-trader Binary, umthombo wolwazi olulekayo, izeluleko kanye nokufunda kwabahwebi abasha noma abanolwazi abafuna ukwazi kabanzi ngezinketho kanambambili, i-Forex Ukuhweba kanye ne-Cryptocurrency. Kuwebhusayithi yethu uzoba nokufinyelela okungenamkhawulo kokulandelayo:
• Imininingwane eyisisekelo yezinhlobo zezinketho, i-psychology yokuhweba nokuqhathanisa izindleko
• Usizo lwecebo - ukuphathwa kwemali, izinhlobo ezahlukahlukene zamasu, kanye nokuhlaziywa kwezobuchwepheshe
• Ukubuyekezwa komthengiseli - ulwazi olucacile kubathengi abaqinisekisiwe abaphezulu
• Umkhonyovu - izeluleko zokuthola umkhonyovu ongaba khona
• Ama-akhawunti wedemo - ukubuyekezwa kuma-akhawunti e-demo ahlukile
• Izimpawu - imininingwane esemqoka ebangeni lezimpawu ezahlukahlukene
• Izinketho zebhulogi - vuka kuze kube yimanje ngokuthunyelwe kwethu kwakamuva kokuhweba okukhethwa kukho
Ukuhweba okukhethwa kukho kanambambili kanye nokuhlaziywa kwezobuchwepheshe
Lapho kuthengiswa ngezinketho kanambambili, umuntu uyadingeka ukulinganisa indlela lapho intengo yempahla ingahambisa khona, ngokubhekisisa ngentengo yesiteleka, ekugcineni ...
Izindlela Zokuthambekela - Ithuluzi Eliwusizo Kwindlela Kanambambili Yokuhweba
Okukhethwa kukho kanambambili kukhula ngokuthandwa ngabatshalizimali bomhlaba wonke ngezimpawu zabo zokulula nezinzuzo eziningi. Kodwa-ke, njengoba ongakhetha kanambambili kudinga eyodwa ukulinganisa ukuthambekela kwesikhathi esizayo kwempahla ...
Isisetshenziswa se-One Stop Sokuhweba Izinketho
Noma ngabe ufuna izeluleko zokuthuthukisa isu noma ufuna ukuwela ukubuyekezwa kokubheka kubathengi abaphambili, iwebhusayithi yethu inikezela abathengisi abasha nabanolwazi ngayo yonke imininingwane ebalulekile.
I-Tick Trade App
Ukuhweba kwe-24 / 7
Inani lokuhweba elincane le- $ 1
Ibhonasi yamahhala ye- $ 20
I-Bunary ibinikela ngezinsizakalo zokuhweba eziku-inthanethi kusukela ngo-1999. Sekuyiminyaka engaphezu kwemine sithuthukisa iplatifomu yethu yokuhweba yonkana, ngenkathi senza konke esingakwenza ukwenza ukuhweba kube ntofontofo futhi kube yinzuzo kuwe.
I-Forex yimakethe yokushintshaniswa kwamanye amazwe lapho imali ithengiswa khona ngababili. Imakethe yokushintshaniswa kwamanye amazwe iqukethe zezimali ezivela kuwo wonke amazwe, ithengiswe amahora we-24 ngosuku, ngoMsombuluko kuze kube uMgqibelo.
I-Alert Arrow Binary Options Ssrc Akukho Okuphindaphindayo
Izinkomba ze-Turbo ze-Forex kanye noHlelo Lokuhweba
Ukuhweba nge-Forex kusebenza ngokuthenga imali eyodwa komunye lwemali. Izinhlobo zezimali zihlala zimbili ngohlobo lwemali lokuqala kubabili (enye ngakwesobunxele) ibizwa nge- 'base' lwemali, kanti enye enye imali kubhangqwana (ngakwesokudla) ibizwa ngokuthi imali 'ephikisayo'.
Isibonelo: I-EUR / i-USD - i-EUR (i-Euro) yimali eyisisekelo ne-USD (I-US Dollar) yimali esetshenziswayo.
Inzuzo (noma ukulahleka) yenziwa yimali eyodwa yokwazisa noma ukwehla ngokubhekisele kwenye imali ekubhanganisheni kwemali.
Uthenga i-pair yemali uma ukholelwa ukuthi imali eyisisekelo izoqinisa ngokumelene nemali ephikisayo. Uthengisa umbhangqwana wemali uma ukholelwa ukuthi isisekelo semali sizokwehla ngokuqhathaniswa nemali ephikisayo.
Inzuzo ilinganiswa kuma-Pips - Amaphesenti ku-Points. Cishe wonke amabhangqa emali acashunwe ezindaweni ezinezinombolo ze-5 ngokushintshwa endaweni yokugcina yokugcina - okubizwa ngokuthi yi-'ip '. Isibonelo, i-EUR / USD inenani le-1.3542 - i-2 ekugcineni iyipayipi. Uma intengo ye-EUR / USD inyukele ku-1.3544, khona-ke i-EUR / USD kuthiwa ikhuphukile i-2 pips.
Uma uthenga noma uthengisa uhlobo lwemali kuhlale kukhona isilinganiso samanani amabili - Intengo yebhidi nentengo ebuzwayo. Umehluko phakathi kwamanani ubizwa ngokuthi ukusabalala. Intengo yebhidi imelela inani eliphakeme umthengi azimisele ngalo ukukhokhela imali, ngenkathi intengo eceliwe imelela inani eliphansi umthengisi azimisele ukulithola ngohlobo lwemali.
Ukuhweba kwe-Forex kuyahlaziywa, esimeni sabathengisi be-Forex, okuyisisekelo se-100: I-1 iyanikezwa. Lokhu kusho ukuthi konke ukuhweba kukhuliswa ngezikhathi ze-100, kunika amandla inzuzo ephezulu njengoba umhwebi ekwazi ukukhuphula inani elithengiwe.
Amarobhothi e-Forex Wokuhlangenwe nakho Kokuncintisana
Uma ungumhwebi ofisa ukuhweba usebenzisa amarobhothi e-Forex njengoba ucabanga ukuthi angenza kangcono kunawe, awuwedwa ocabanga kanjalo. Ngoba ukuhweba kwe-Forex kuthonywa yimizwa nemizwa yomthengisi ngamunye, isikhathi esiningi izinqumo zivame ukungaphumeleli. Lokhu akuyona into oyifunayo lapho ukuhweba ngamabili ngababili; Ngakho-ke, udinga amarobhothi e-Forex.Akunakusho ukuthi i-robot ye-Forex iyisoftware yekhompyutha ezenzakalelayo ethengiswa ngokuyisisekelo kubahwebi abanolwazi oluncane noma abanalo nhlobo lwe-algorithms yemakethe yokuhweba eyinkimbinkimbi. Kubalulekile ukwazi ukuthi abathengisi bathi inzuzo ungayithola yize ungekho phambi kwe-PC yakho; kodwa-ke, kufanele usukele enhlanganweni elungile.
Qinisekisa ukuthi empeleni ziyilokho ezithengiswa ukuba ziyikho ngoba uma wehluleka ukukhetha irobhothi elilungile le-Forex, amathuba kungenzeka wehluleke ukwenza inzuzo. Ngakho-ke, khetha amarobhothi e-Forex kusuka ehlathini labahlinzeki. Njengoba kunenqwaba yamarobhothi okuhweba ama-Forex emakethe, kufanele uzizwe ujabule ngezinqumo onazo.
Amarobhothi ase-Forex athi abhekane nochungechunge lwezivivinyo ezibanzi ezikhiqize imiphumela egculisayo yingakho athengiswa njengophumelela ngokuphelele ekukhiqizeni inzuzo engaguquki. Kodwa-ke, yiziphi amarobhothi aphezulu e-Forex kufanele inqunywe nguwe ngemuva kokuhlaziywa okuningi nokuhlolwa kwabahlinzeki ngemisebenzi abaningana.
Amarobhothi Athembekile akwa-Forex
Isibonelo, impendulo robot ephezulu ye-Forex akuyona ukuthi iqonde phambili; kodwa-ke, isici esibaluleke kakhulu okufanele ucatshangelwe lapha kufanele kube umehluko omkhulu phakathi kwencwajana yezandla nezinhlelo zokuhweba ezizenzakalelayo. Noma kunjalo, inketho ekhangayo kakhulu, yomthengisi we-amateur Forex, ukuhweba ngamarobhothi azenzakalelayo e-Forex.
Kubukeka sengathi abathengisi abaningi abebethola inzuzo yokuhweba besebenzisa amathuluzi endabuko abavumelani namarobhothi e-Forex; noma kunjalo, lapho ukhetha amarobhothi aphezulu e-Forex ongawasebenzisa, qiniseka ukuthi unomthombo ofanele wolwazi. Isibonelo, i-traderBinary ikusiza ukhethe irobhothi eyi-Forex efanele futhi ekugcineni ikusize ube ngumthengisi ochwepheshe.
Mhlawumbe indlela ephumelela kunazo zonke yokuhlola ukuthi yimaphi amarobhothi aphezulu e-Forex ukuhambela nokubhalisela amawebhusayithi ahlonishwayo lapho amarobhothi aphezulu e-Forex abukelwa khona. I-traderBinary ngenye yendawo enjalo ekunika imininingwane eningiliziwe mayelana nokunikezwa okuphezulu nezixazululo.
Amasu ayisisekelo Izinketho kanambambili
Izinketho kanambambili - Ukuhweba Ngegolide
Phakathi kwezinhlobo eziningi ezahlukahlukene zezimpahla ezifakiwe njengezimpahla ezingaphansi kwemakethe yezinketho kanambambili, enye yezimpawu ezivame ukuthengiswa igolide. Abathengisi abaningi bakuthola ngokweqile ...
Amasu wokukhethwa kukho kanambambili: EUR / USD
Okukhethwa kukho kanambambili kuletha abathengisi bawo izinhlobonhlobo zezimali ezahlukahlukene ukuhweba nazo njengezimpahla ezingaphansi. Isihloko esilandelayo sixoxa ngamasu alula okuhweba kwi-EUR / USD ....
I-Binary Options Range Ukuhweba Isu
Okukhethwa kukho kanambambili kungabhekanwa nakho kwezindlela eziningi ngokuya ngohlobo lwecebo ohlela ukulisebenzisa. Isihloko esilandelayo sichaza kuphela isu lokuhweba le-IN / OUT ...
Ngamagama alula, izimpahla yizinto zokusetshenziswa ezisetshenziselwa ukusiza empilweni yethu yansuku zonke. Sisebenzisa amandla ukuyixhasa, izinsimbi ukuze
bakhe izikhali namathuluzi, nemikhiqizo yezolimo yokudla. Lawa - amandla, izinsimbi, nemikhiqizo yezolimo - yilezi zigaba ezintathu zezimpahla, futhi yizakhi ezibalulekile zokwakha umnotho womhlaba.
Izimpahla ngokuvamile zihlangabezana nalezi zindlela ezilandelayo:
Ukuhweba: Okusho ukuthi kudingeka kube nemoto esebenzayo yokutshala imali ukukusiza ukuhweba. Isibonelo, impahla efakiwe ifaka inkontileka yesikhathi esizayo eyabelwe yona kwenye yokushintshaniswa okukhulu, noma uma inkampani iyicubungula, noma uma kunesikhwama esihlanganyelwayo esidonswa njengamasheya ekushintshisaneni.
I-Uranium, okungamandla abalulekile lezimpahla, ayilandelelwa inkontileka yesikhathi esizayo, kepha izinkampani eziningi zigxila kakhulu ezimayini nasekusebenzeni lezi zimbiwa. Ngokutshala imali kulezi zinkampani, uthola i-uranium.
Ukukhishwa: Amafutha aluhlaza afakiwe ngoba angathunyelwa emiphongolweni, kuthi kufakwe ukolweni ngoba kungathunyelwa ngogologo.
zezimali: Yonke impahla kufanele ibe nemakethe esebenzayo nabathengi kanye nabathengisi abaqhubeka basebenzelana. I-Liquidity ibalulekile ngoba ikunikeza inketho yokungena nokuphuma kokutshala imali ngaphandle kokubhekana nobunzima bokuzama ukuthola umthengi noma umthengisi ngokuphepha kwakho.
Izingozi Zokutshala Kumabhizinisi
Ukutshala imali konke mayelana nokuphatha ubungozi obabandakanyeka ekubuyiseni inzuzo. Nazi ezinye izingozi ohlangabezana nazo lapho utshala imali kokuthengiswa kwezinye izinto nezinyathelo ezimbalwa ongazithatha ukunciphisa lezi zingozi.
Ubungozi be-geopolitical kanye nokutshalwa kwezimpahla zezimpahla
Obunye ubungozi bezimpahla ukuthi imithombo yezemvelo yomhlaba itholakala emazwenikazi ahlukahlukene futhi umthetho ophethe ngalezi zinto ulala nohulumeni, izinkampani zamanye amazwe, nezinye izinhlangano. Isibonelo, ukufinyelela i-deposits enkulu yamafutha atholakala esifundeni sasePersian Gulf, izinkampani zika-oyela kufanele zibhekane namazwe azimele ase-Middle East anegunya phezu kwalawo oyela.
Ukungavumelani kwamazwe omhlaba ngokulawulwa kwemithombo yemvelo kuvame kakhulu. Kwesinye isikhathi izwe eliphethe liyomane likhiphe izinkampani zangaphandle ezibandakanyeka kwi
Ukukhiqiza nokusabalalisa izinsiza zemvelo.
Ngakho-ke ungazivikela kanjani kulokhu kungaqiniseki? Enye indlela ukutshala imali ezinkampanini ezinesipiliyoni nezomnotho wesilinganiso. Isibonelo, uma ngabe unesifiso sokutshala imali enkampanini kawoyela yamazwe omhlaba, hamba neyodwa enerekhodi elilungiselelwe.
Ingozi ebekiwe yezimpahla
Izimakethe zezimpahla, njengamabhondi noma izimakethe zamasheya, zigcwele abathengisi abanentshisekelo enkulu yokwenza inzuzo yesikhashana esifushane ngokubeka ukuthi intengo yezokuphepha izokhuphuka noma yehle.
Uma uhweba okuthengiswayo, hlola njalo izimakethe, ukuthola okuningi ngangokunokwenzeka mayelana nokuthi ababambiqhaza bezimakethe ngobani ukuze wehlukanise phakathi kwabasebenzisi bezentengiso nabaqageli.
Umthombo owodwa ongawuhlola umbiko we-ukuzibophezela kwabahwebi, obekwa yi- Ikhomishini Yokuhweba Yezinto Ezihamba Phambili (CFTC).
Ukubuyekezwa Kwabathengi be Forex
Ukuhweba nge-Forex kunamandla amakhulu futhi umcabango jikelele uwukuthi umuntu akadingi ukukhathazeka kakhulu ngama-nuances enza lolu hlobo lokuhweba. Iqiniso ...
Izici ezibalulekile okufanele wazi lapho utshala imali ku-Forex
Imakethe ye-Forex ifaka imali enkulu esetshenziselwa umhlaba wonke, futhi kubalulekile ukuthi abathengisi bazigcine bebuyekeziwe mayelana nemikhuba yakamuva ehlobene nemakethe. Izinqumo eziphumelelayo ku-Forex ...
Ibhonasi yamahhala ye- $ 20 Buyekeza Vakashela
Bon I-100% Ibhonasi yediphozithi Buyekeza Vakashela
Bon I-50% Ibhonasi yediphozithi Buyekeza Vakashela
Xhumana nathi - Imigomo Nemibandela - Inkampani - Inqubomgomo yobumfihlo - Cookie yemfihlo
Isexwayiso Esijwayelekile Sengozi: Izinketho Zokuhweba Okukodwa okuphethe ubungozi obukhulu futhi kungaholela ekulahlekelweni kwemali oyitshalile. Njengoba kunje, Izinketho kanambambili zingahle zingakulungeli. Akufanele utshale imali ongeke ukwazi ukuyilahlekisela. Ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuhweba, kufanele ucabangele izinhloso zakho zokutshala imali, izinga lesipiliyoni nokubekezelela ubungozi. Akukaze kube ngaphansi kwezimo lapho sinesibopho kunoma yimuphi umuntu noma ibhizinisi lenhlangano (a) noma yikuphi ukulahleka noma ukulimala okuphelele noma okudala okubangelwa, okuvela, noma okuhlobene nanoma yikuphi ukuthengiselana okuhlobene Okukhethwa kukho kanambambili noma (b) noma yikuphi ukuqondisa, okungaqondile, okukhethekile , Umphumela noma ukulimala okulimazayo noma yini.
MAHHALA DEMO ACCOUNT $ 10.000